Ordesa de Manuel Vilas: chii icho uye izvo izvo munyori anotiudza mubhuku | Zvazvino Zvinyorwa
Ordesa yaManuel Vilas
Rimwe remabhuku akapa zvakanyanya kutaura nezvazvo ndere Ordesa naManuel Vilas. Iri ibasa mune iro vazhinji vanoona chikamu chehupenyu hwake chichiratidzwa, kana chingatoita senge nhoroondo yehupenyu hwemunyori iye. Asi Ordesa yakanyanya.
Tevere, tinoda kutaura newe nezve iro bhuku, munyori waro, uye zvese zvaunofanirwa kufunga nezvazvo kuti utange kuverenga iro nekukurumidza sezvazvinogona. Iwe unoda kuziva chii chinonzi Ordesa de Manuel Vilas nezve?
1 Manuel Vilas ndiani
2 Bhuku raOrdesa
2.1 Uye chii chinonzi Ordesa nezve?
3 Ndezvipi zvirevo zveOrdesa de Manuel Vila?
4 Zvimwe zvinotorwa kubva kuOrdesa de Manuel Vila
Manuel Vilas ndiani
Manuel Vilas munyori akazvarwa muHuesca muna 1962. Akadzidza Hispanic Philology uye, kwemakore makumi maviri, aishanda semudzidzisi wepachikoro chesekondari. Nekudaro, iko kushevedzwa kwekunyora kwakamuita kuti asiye basa rake achida zvinyorwa. Akatanga kusimudzira nhetembo, pamwe nezvinyorwa uye zvinyorwa. Muchokwadi, Ordesa haisi yake yekutanga kubudirira kukuru, isati yatungamirwa nevamwe vazhinji vakaita saAire Nuestro, muna 2009, kana Lou Red era español, muna 2016.
Izvo zvinofanirwawo kuyeukwa kuti aive wekupedzisira muPlaneta Mubairo mu2019 nebasa rake "Mufaro pahukama pakati pevabereki nevana."
Semunyori, Akabatana mune mamwe midhiya anozivikanwa muSpain. Tinotaura nezvaEl Mundo kana El Heraldo de Aragón (vese vanobva kuboka reVocento), La Vanguardia, El País, ABC… Kunyangwe paredhiyo vakawana niche uye vakabatanawo naCadena Ser.
Sekureva kwemunyori iye amene, Ordesa akatanga kutora chimiro mushure mekufa kwamai vake, kwakaitika muna Chivabvu 2014. Kuna Vilas raive gore rakaipa, sezvo iye akarambanawo panguva iyoyo.
Bhuku Yakaenderera ichitengeswa mu2018 neAlfaguara imba yekutsikisa uye yakakwanisa kubudirira. Yakawana gumi nemana edhisheni, ese ari pasi pegore, zvakaita kuti itengese anodarika zviuru zana zvemakopi. Raive iro bhuku regore (ra14) renhau dzakasiyana siyana seEl País, La Vanguardia, El Mundo, El Correo ... Uye yakaenda kunze kwenyika, sezvo dzimwe nyika zhinji dzakacherekedza basa (United States, United Kingdom, Italy, Portugal…). Shanduro dzinoverengeka dzebhuku dzakabuda gore rakatevera, senge chiItari kana chiPutukezi.
Uye chii chinonzi Ordesa nezve?
Kana isu tikakuudza iwe nekukurumidza uye kongiri mhinduro, Isu tinokuudza kuti Ordesa de Manuel Vila inobata nehukama huripo pakati pevabereki nevana.
Iyo inoverengeka ine akanyanya kubata emunhu iye munyori uye nhasi ibhuku renongedzo kune vese vanyori uye neruzhinji rwekuverenga ruzhinji.
zhinji vamwe vanyori vakapa maonero nezveOrdesa. Tinogona kuratidza mamwe emamwe mazwi ezvimwe zvinonyanya kuzivikanwa senge:
"Rimwe remabhuku ane hunhu, akadzika, uye anonyaradza andakaverenga kwenguva yakareba."
«Ndiyo dambarefu, dura, ndangariro dzisina kunyepa kana nyaradzo yeupenyu, yenguva, yemhuri, yemagariro akatongerwa kushanda nesimba uye michero shoma. […] Zvinotora kunyatsojeka kuverenga zvinhu izvi, zvinotora asidhi, banga rakapinza, pini chaiyo inobaya pasi rese risina maturo. Chasara mukupedzisira manzwiro akachena echokwadi nekushungurudzika kwezvose zvakarasika. "
Para muchos, Ordesa yakafanana netsamba yapashure iyo Manuel Vila akanyorera vabereki vake. Kuburikidza nezvitsauko zvipfupi, izvo zvakabatana pamwe chete, tinodzidza nyaya yemunhu asingabatsiri uye akadzura midzi uyo anoedza kurarama nepese paanogona napo, uyo anoziva zvimwe zvinhu zvinoita kunge "zvidiki uye zvisina basa" uye zviri kunyanya kukosha kupfuura zvatinotenda. .
Izvo zvakanyorwa nemutauro wakapusa asi panguva imwechete zvakaomarara, uye kune zvimwe zvikamu zvinogona kunetsa kunzwisisa, kana kunyatsoziva zviri kutaurwa nemunyori pachake. Iye ane ruzivo, kunyanya munhetembo, asi kazhinji anotadza kushandisa zviwanikwa izvi kurondedzero, izvo zvinoita kuti muverengi arasike zvishoma.
Kana iri nyaya, hapana mubvunzo kuti inotaura zvichibva pamoyo, nekuti inofumura zvaakararama, kunyangwe kwete mumunhu wekutanga, asi aine hunhu hwakafanana uyo haangotauri zvake zvakapfuura, asiwo iyezvino kuti muverengi ane nzira yehupenyu hwake. Uchifunga kuti izvo zvekuudza hupenyu hwako zvine fashoni, ibhuku raungade kana iwe uchida iro rekunyora mhando.
Ndezvipi zvirevo zveOrdesa de Manuel Vila?
Zvinyorwa zveOrdesa de Manuel Vila ndizvo chimwe chinhu chepakutanga uye chakanyatsosiyana kubva pane zvaunotarisira kubva munoverengeka. Uye zvakanyorwa mumunhu wechitatu uye hazvizarure meseji yechokwadi inotakurwa nebhuku, asi zvanyanya. Pamwe ndosaka ichikwezva kutarisisa.
Rakanyorwa pane dzimwe nguva kubva pamisodzi, uye nguva dzose kubva pamanzwiro, bhuku iri inhoroondo yepedyo yeSpain mumakumi emakore apfuura, asi zvakare rondedzero nezve zvese zvinotirangaridza kuti tiri vanhu vanotambura, nezve kudiwa kwekusimuka toenderera mberi apo pasina chinhu zvinoita kunge zvinoita kuti zviitike, kana zvisungo zvese zvakatibatanidza isu nevamwe zvanyangarika kana kudamburwa. Uye isu tinopona.
Zvimwe zvinotorwa kubva kuOrdesa de Manuel Vila
Kubudikidza Imba Yekunze, mune rako bhuku rezita dhesiki, tinogona kuva ne Ordesa maitiro ekutanga nezvimwe zvakatorwa kubva mubhuku. Isu tinovasiya pazasi kuitira kuti iwe ugone kusarudza kuti ungaverenga here.
Uye ini ndakatanga kunyora bhuku iri. Ndakafunga kuti mamiriro emweya wangu aive ndangariro isina kujeka yechimwe chinhu chakaitika munzvimbo yekuchamhembe kweSpain inonzi Ordesa, nzvimbo izere nemakomo, uye yaive yeyero ndangariro, yero yeruvara yakapinda zita reOrdesa, uye mushure meOrdesa chimiro chababa vangu chakavezwa muzhizha ra1969. »
«Kana hupenyu huchiita kuti iwe uone muchato wekutyisa nemufaro, iwe wagadzirira kuzadzikiswa. Kutya kuri kuona fuselage yenyika. "
"Amai vangu vaive mutauri wenyonganyonga. Neniwo. Kubva kuna amai vangu ndakagara nhaka nyonganiso yenyaya. "Handina kurigamuchira kubva kune chero chinyakare tsika, yechinyakare kana avant-garde."
“Chidhakwa chose chinosvika panguva apo chaanofanirwa kusarudza pakati pekuenderera mberi nekunwa kana kuramba ndichirarama. Rudzi rwekuperetera sarudzo: kungave iwe chengeta iwo bes kana maoves. […] Ani naani akanwa zvakanyanya anoziva kuti doro chishandiso chinokanganisa kukiya kwenyika. "
«Ini ndinonyora nekuti vapirisita vakandidzidzisa kunyora. Mazana manomwe emamiriyoni ekurapa. Ndiko kusagadzikana kukuru kwehupenyu hwevarombo muSpain: Ndine chikwereti chakawanda kuvapristi kupfuura kuSpanish Socialist Workers Party. Irony yekuSpain inogara iri basa rehunyanzvi. "
«Ini handifarire zvakaitwa neSpain kuvabereki vangu, kana zvazviri kundiitira. Kupokana nekuparadzaniswa kwevabereki vangu handichagone kuita chero chinhu, hazvidzoreke. "Ini ndinogona kungoita kuti zvisaitike kwandiri, asi zvakatozadzika."
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Ordesa yaManuel Vilas
Nhoroondo mabhuku anoenderana nezvakaitika zvechokwadi